Hiiraan: Al Shabaab oo isaga baxday deegaanka Halgan
Posted On 24-04-2017, 08:28PM
BALADWEYNE, Somalia- Mallayshiyaad katirsan ururka Al Shabaab ayaa isaga baxay deegaanka Halgan oo katirsan gobolka Hiiraan, halkaasoo lagusoo waramayo inay ku wajahanyihiin ciidamo huwan ah oo katirsan dowladda Somalia iyo Ethoipia.
Sida ay GO u xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah kooxdan ayaa u ruqaansatay duleedka deegaankaas, waloow ay jiraan kooxo ku harsan Halgan.
Saraakiil katirsan dowladda Somalia ayaa ku waramay inay kusii jeedaan ciidamadoodu deegaankaas oo ay faarujiyeen sannadkii hore.
Dadka deegaanka ayaa ka cabsi qaba dagaal halkaas ku dhexmaray ciidamada huwanta ah iyo mallayshiyada Al Shabaab.
Waxay sidoo kale ka cabsi qabaan in kooxdaas ku amarto shacabka inay ka baxaan deegaanka maadama ay kusoo wajahanyihiin ciidamo katirsan dowladaha ay dagaalka kula jiraan.
Tallaabadan ayaa dhowr jeer oo hore ku kaceen ururkan xiriirka la leh Al Qaacida.
Majirto ilaa hadda war rasmi ah oo kasoo baxay dhinacyada arrimahaasi khuseeyaan oo ku aadan xaaladda deegaanka Halgaln oo iminka degan.
Halkan ayaa ah goob Istaraatiji ah oo isku xirka degmooyinka Beledweyne iyo Buula-burte iyadoo ay u ganacsi tagaan dadka ku nool gobolka.
Bishii June, 2016 ayaa waxaa deegaankaasi ka dhacay dagaal lagu hoobtay oo dhexmaray ciidamada dowladda Ethoipia iyo ururka Al Shabaab, waxaana ku dhintay in kabadan 200 oo u badnaa xarakadaas kadib markii ay weerareen saldhig ciidamadaasi lahaayeen.